ỊTỌ RAMBLER OZI MAKA OZI AHỊA - RAMBLER MAIL - 2019
Ịtọ ozi Rambler na ndị ahịa email
ABBYY PDF Transformer bụ software enyere maka ịhazi faịlụ PDF - ịmepụta, ịtụgharị ma dezie.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmepụta PDF site na akwụkwọ nke ụdị nkwado ọ bụla - faịlụ ederede, akwụkwọ Word, Excel na PowerPoint, nakwa site na ihe oyiyi JPEG, PNG, BMP na TIFF. Na-akwado mmakọ akpaka nke ọtụtụ isi mmalite n'ime otu akwụkwọ na nchịkọta data site na nyocha.
Software na-enye gị ohere gbanwee faịlụ PDF ọbụla. Ọ na-akwado ntọghata na ụdị niile site na nke ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ, gụnyere FB2 na Extensions EPUB (e-akwụkwọ).
ABBYY PDF Transformer na-agụnye editọ editọ PDF dị mfe ma dị mfe, nke ị nwere ike ịgbanwe ọdịnaya dị na ibe.
Akwụkwọ. Na ngọngọ a, ọrụ nke ịmepụta faịlụ ọhụụ ma gbakwunye ozi na akwụkwọ edeturu dị.
Na-echekwa ma zipu. N'ebe a, ị nwere ike ichekwa, tọghata, bipụta faịlụ ma ọ bụ ziga ya site na e-mail.
Ime mgbanwe. Akụkụ a nwere ọrụ nhazi maka ịgbakwunye ma wepu ihe ederede na ihe oyiyi, yana nhichapụ nke na-enye gị ohere ihichapụ ọdịnaya ọ bụla na ibe.
Nyocha. Na ngọngọ a, a na-eme ihe iji gbakwunye ozi njirimara - nkọwa, stampụ, ọnụ ọgụgụ na nhọrọ. Lee ị nwere ike ịgbakwunye mbinye aka dijitalụ na akwụkwọ ma chebe ya na paswọọdụ.
Ihe omume ahụ na-agbakwụnye atụmatụ ọhụrụ na nchịkọta Okwu. Onye ọrụ ahụ nwetara ohere, na-enweghị oghere ABBYY PDF Transformer, iji mepụta PDF akwụkwọ kpọmkwem na interface nke Okwu. Na-agbakwụnye faịlụ ndị ọzọ na PDF na email na-akwado.
Ezigbo nchịkọta akụkọ na ọrụ ndị dị mkpa;
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro nkwado maka ịmepụta na ịtụgharị faịlụ;
Ikike iji chebe akwụkwọ na amaokwu na okwuntughe;
A sụgharịrị interface ahụ n'asụsụ Russian.
Oge ikpe ikpe oge 30 ụbọchị site na ụbọchị echichi na kọmputa.
ABBYY PDF Transformer bụ usoro magburu onwe ya maka ịmepụta faịlụ PDF, nke enweghị ọrụ ndị na-enweghị isi, mpempe akwụkwọ egosiri ike na ntọala dị mgbagwoju anya. Enwere ike iji ngwanrọ a rụọ ọrụ maka ụbọchị 30 n'enweghị mmachi ọrụ na mmiri mmiri, nke a na-ahụkarị n'etiti ndị mmepe nke ngwanrọ ndị ọzọ.
Biko mara na ibudata mbipute ikpe, ị ga-abanye adreesị ozi-e gị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti - ọ ga-enweta njikọ iji budata installer ahụ.
Download mbipụta nke ABBYY PDF Transformer
Otu esi eji Abbyy Finereader ABBYY FineReader PDF faịlụ mmepụta software Ịghọta ihe ederede site na mbido ahụ na-eji ABBYY FineReader
ABBYY PDF Transformer bụ usoro dị oke aka maka ịkepụta, ịtụgharị ma dezie PDF akwụkwọ. Ọ nwere nchịkọta bara uru, na-akwado ọtụtụ usoro.
Onye Mmepụta: ABBYY
Ọnụ: $ 104